Nhau - Ungasarudza sei kurudyi one pelletizing muchina?
Zvigadzirwa zvepurasitiki zvinoita basa rakakosha munzvimbo dzakasiyana dzekugadzirwa kwemaindasitiri uye zvekurima uye hupenyu nehunhu hwavo hwakajeka senge huremu hwakareruka, simba rakakwira, ngura kuramba, uye kugadziriswa kuri nyore. Nekudaro, nekushandiswa kwakawanda kwezvigadzirwa zvepurasitiki, kuraswa kwemarara epurasitiki rave dambudziko rakaoma, pakati paro iro "rakaoma kudzikisira zvakasikwa" rave dambudziko risingaperi rinoda kugadziriswa nekukurumidza mukusvibisa kwezvakatipoteredza zvepasirese.
Mumakore achangopfuura, nekukurumidza kuvandudzika kwenyika yangu epurasitiki indasitiri, epurasitiki granulator indasitiri yakagadzirawo nekukurumidza. Iyo granulator inogona kugadzira zvigadzirwa zvekare zvepurasitiki mumapellets epurasitiki kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana kuti uwane mhedzisiro yepurasitiki marara. Iyo granulator indasitiri inosanganisira nzvimbo zhinji dzehupfumi hwenyika. Haisi chete yakakosha yakakosha yekugadzira chinongedzo chenhamba huru yezvigadzirwa zveindasitiri uye zvekurima, asi zvakare inoita basa rakakosha mukugadzirisa kusvibiswa kwepurasitiki yenyika yangu, kuwedzera mwero wekudzokorodza wezvigadzirwa zvepurasitiki, uye nekumisikidza hurongwa hwakaperera hwekudzokesa mapurasitiki. .
Kune makambani epurasitiki akadzokororwazve, kuti ungasarudza sei pelletizer inokodzera mashandisirwo avo yakakosha, nekuti pelletizer yepurasitiki haigone kuburitsa mapurasitiki ese nekuda kwekumanikidza kwakasiyana uye kumanikidza kwekuwedzera. General granulators anogona kudzokorora uye kugadzira granulate mapurasitiki muhupenyu hwezuva nezuva, asi sevamwe mapurasitiki akakosha, senge ouinjiniya mapurasitiki, muchinjikwa-wakabatanidzwa polyethylene, yakarukwa jira, nezvimwewo, akakosha magranulators anoda kudzokororwazve uye granulated. Naizvozvo, vagadziri vanofanirwa kutarisisa pamhando dzemapurasitiki avanoda kudzokorora pavanotenga pelletizer, vobva vasarudza yakakodzera pelletizer.
Uye zvakare, kana uchitenga granulator, iwe zvakare unofanirwa kuteerera kune anotevera mapoinzi:
Jekesa chinangwa uye chinangwa chekutenga iyo granulator. Parizvino, pane angangoita matatu marudzi evatengi vanotenga granulators mumusika. Dzinodyarwa uye dzinotangwa nemakambani ega kana akazvimirira. Vagadziri vemapurasitiki vanotenga maginara ekugadzirisa dambudziko rezvasara kubva kumafekitori avo. Ikozve kune vanogovanisa nekutengesa mabhizinesi. Kune vatengi vanotanga mabhizinesi avo vega kana emabhizinesi akazvimirira, ivo vanofanirwa kujekesa mhando dzemapurasitiki anogadzirwa neiri bhizinesi kana uchitenga pelletizer. General pelletizers anokwanisa chete kudzokorora uye kuburitsa zvakajairika-chinangwa mapurasitiki anoenderana nePP uye PE, ayo zvakare akajairwa epurasitiki mbishi zvigadzirwa mumupurasitiki musika. Iyo PS furo yezvinhu musika iri diki. Kana paine yakajeka yekutengesa chiteshi yemapurasitiki akakosha, vashandisi vanogona zvakare kutenga inoenderana pelletizers.
Iko kuita kweiyo granulator. Granulators inogona kukamurwa kuita imwechete-sikuru granulators uye mapatya-sikuru granulators zvinoenderana nehuwandu hwezvikwiriso. Kana iyo imwechete-sikuru granulator iri kushanda, ipurasitiki inoendeswa kumberi mukutenderera iri mudhiramu. Kana iyo twin-screw granulator iri kushanda, ipurasitiki inoendeswa kumberi munzira yakatwasuka mudhiramu. Zvinoenderana nesisitimu yekushanda, kana muchina wemapatya-sikuru ukamiswa, izvo zvinhu zviri mumushini zvinogona kudururwa, uye iyo imwechete-sikuru muchina inogona kuchengeta mashoma mashoma ezvasara. Mapurasitiki mazhinji anogona kupetwa, uye imwechete- uye mapatya-sikuru anogona kushandiswa pasina mutsauko.
Nekudaro, kana uchigadzira mapurasitiki akadzokororwazve, nekuda kwenzvimbo hombe yechinhu chinochinja skrini uye nyore kuvharisa, iyo-sikisi muchina inoshanda zvakanyanya; paunenge uchigadzira mapurasitiki akachinjika, mavara ematebatches, uye kupombana kwemavara kupomba, zvinokonzeresa zvemachina maviri zvakaenzana. ; Paunenge uchigadzira yakarebesa girazi faibha uye muchinjika-wakasunganidzwa wepasi pemvura tambo zvigadzirwa, chete mapatya-sikuru granulators anogona kushandiswa. Uye zvakare, maererano nemichina yekutenga mitengo uye yekupedzisira yekugadzira mitengo, imwechete-sikuru granulation mikana yakaderera zvakanyanya, nepo mapatya-sikuru granulators ari pakaipisisa kukanganisika. Naizvozvo, kana uchitenga michina, zvinodikanwa kusarudza inoenderana michina zvinoenderana nezvinhu zvakasiyana zvinogadzirwa nebhizinesi.